Herbivores, dia ilaina amin'ny fanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina sy ny fisorohana ny macroalgae amin'ny haran-dranomasina mitombo be. Ny mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny herbivore amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fanesorana ny herbivore ao amin'ny MPA ary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjono sy ny mpitantana ny jono mba hiarovana ny fahaveloman'ny mponina herbivore ao amin'ny tontolo voajanahary. Ny lalàna momba ny jono dia manome rafitra ara-dalàna amin'ny fiarovana ny herbivora, saingy ny ankamaroan'ny paikady fitantanana ny jono efa misy dia tsy natao hiarovana ny anjara asany toy ny herbivora.
Ny fandrarana ny fanesorana ny herbivora (na ny fandrarana ankapobeny amin'ny fanjonoana) amin'ny ampahany amin'ny toeram-ponenana na amin'ny toerana manan-danja ho an'ny herbivores (toy ny toerana fanangonana) dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny isan'ny herbivore.
Fiarovana amin'ny familiana
Ny herbivora amin'ny ankapobeny dia tsy tratra amin'ny fanjonoana fanjonoana fanjonoana, fa lasibatra amin'ny fandrika, harato na lefona. Ny trondro herbivora sasany, toy ny parrotfish, dia tena marefo amin'ny fanjonoana amin'ny alina sy ny fanjonoana amin'ny SCUBA. Ny famerana ny fampiasana karazana fitaovana fanjonoana na fotoana fanjonoana sasany dia mety hampihena ny tsindry amin'ny herbivores.
Mandrarana ny karazana
Ny fomba mahomby indrindra hiarovana ny herbivora dia ny fandrarana tanteraka ny fanangonana ireo karazana herbivore fototra. Efa nampiharina tany amin’ny toerana maromaro izao izany, anisan’izany i Belize. Ny fomba fiasa mifototra amin'ny tsena, toy ny fandrarana ny fivarotana herbivora, dia afaka manakana ny jono ara-barotra ho an'ny karazana herbivora na dia mbola mety ho loharanon-kery lehibe amin'ny toerana maro aza ny jono mivelona.
Ny anjara asan'ny herbivores dia mety ho manan-danja indrindra aorian'ny fisehoan-javatra manelingelina izay mamono ny haran-dranomasina, toy ny rivo-doza na ny fandotoana haran-dranomasina. Ny mpitantana dia afaka mandinika ny famerana vonjimaika amin'ny fiotazana karazana herbivore manan-danja mba hampitomboana ny fahafahan'ny mponina haran-dranomasina ho tafarina raha tsy misy ny fanerena fanampiny amin'ny fifaninanana tafahoatra amin'ny alga.
Famerenana amin'ny laoniny ny herbivore
Amin'ny tranga izay nihena ny isan'ny herbivore noho ny fanjonoana tafahoatra na ny aretina, ny famerenana amin'ny laoniny dia mety ho fomba azo atao indrindra hanarenana ny mponina amin'ny ambaratonga ilaina mba hisorohana na hamerenana ny fifindran'ny dingana. Isan'ny nifantohan'ny andrana fanarenana natao fanampiana tany amin'ny toerana sasany izay iray amin'ireo loharanon'ny herbivora (izay mety ho famantarana ny isan'ny herbivore trondro efa lany), saingy tsy mbola nisy ohatra ny amin'ny famerenana amin'ny laoniny mivelatra. .
Ny parrotfish dia mifehy ny fitomboan'ny alga ary mitazona ny fototry ny haran-dranomasina ho an'ny fitrandrahana vatohara. Sary © Jeff Yonover
Ho fanaraha-maso ny fikajiana ny ala marinaro amin'ny haran-dranomasina any Maui, Hawai'i, ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKahekili Herbivore Maneran-tany dia naorina. Natao hampitomboana ny habetsahan'ny hazandrano sy zotranomasina ao an-toerana amin'ny alàlan'ny fomba fitantanana ny jono. Ohatra, urchins zaza tsy ampy taona natsangana hatchery (Tripneustes gratilla) dia navoaka tao amin'ny vatohara mba hialokaloka ireo ala mpihaza ary hampiroborobo ny fanarenana ny vatohara.
Fandalinana tranga - fitantanana jono ho an'ny hanoherana ny haran-dranomasina: faritra fitantanana jono jono an'i Kahekili Herbivore
Fandalinana tranga - Fanaraha-maso ireo vondrom-piarahamonina haran-dranomasina ao amin'ny faritra fiarovana voalohany an'i Herbivore ao Hawai'i